लेन मिच्नु भयो ? अब घरमै आउँछ फोन ! — News of The World
लेन मिच्नु भयो ? अब घरमै आउँछ फोन !
संसार न्यूज संवाददाताआषाढ २९, २०७५
२९ असार, काठमाडौं । तपाई सडकमा सवारी गडाउँदा कसरी गुडाउनुहुन्छ ? लेनको पालना गनुर्हुन्छ वा हुन्न ! तर, अब सवारी चलाउँदा लेन मिचियो अथवा लेन अनुशासनो पालना गर्नु भएन भने होस् गर्नुहोस्, तपाइको घरमै फोन आउछ लेन मिचिएको भनेर सूचना दिन ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सवारी दुर्घटना कम गर्न र सवारी चालकलाई अनुशासित बनाउन भन्दै उपत्यकामा लेन अनुशासनको पालनामा कडाई गरेको हो । यसका लागि महाशाखाले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ‘सर्भिलेन्स भेइकल’ राखेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
महाशाखाका प्रमुख वसन्त पन्तले लेन अनुशासनको पालनामा जोड दिन र सवारी दुर्घटना कम गर्नका लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ‘सर्भिलेन्स भेइकल’ राखिएको बताए । यो भेकल विशेष क्यामेरा जडित र चारै क्षेत्रको सडक अनि सवारीको अवस्थाको रेर्कड राख्न सक्ने विशेष किसीमको रहेको उनले जानकारी दिए ।
मुस्ताङका च्यांग्रा काठमाडौं ल्याउँदा ५ ठाउमा कर
भरियो अख्तियारको हिरासत, डिएसपी र सहचिवको दसैँ पनि थुनामा
सहज भएन मानसिकको रोगको उपचार
दसैं मनाउन साढे २१ लाख यात्रु बाहिरीए